> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Computer
Waxaan soo kaban karto, tirtiray Pictures ka Computer?
Waxaan si qalad ah la tirtiro tiro aad u badan oo ah sawiro laga gal on my computer ka dibna waxaan ka shubeen bin recycle aad. Hadda waxaan doonayaa in aan ogaado sida aan dib ugu heli sawirada aan sababta oo ah waxay run ahaantii muhiim ah igu culus yihiin. Miyuu jiraa qof haysta fikrado? Mahad badan.
Waxaad u qaadan lahaa in mar sawirada ah ayaa la tirtiray ka recycle bin, iyaga noqotay mid aad u adag tahay in ay dib u hanato. Tani dhab ahaantii waa xaq ahayn. Waa maxay runbaa waa in sawiro aad weli ku jira aad drive computer adag. Waxaad si toos ah kaliya ma iyaga ka heli karaan. Ka hor inta macluumaadka cusub on your computer iyaga overwrite, waxaad si fudud u soo kaban karto, sawirada tirtiray ka computer iyadoo la kaashanayo utility ah soo kabashada xogta.
Nasiib wanaag waxaa jira barnaamij kaamil ah loo magacaabay Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac oo kaa caawin kara. Qalabkani waxa uu waxaa loogu talagalay labada Windows iyo Mac isticmaala inuu ka soo kabsado sawirada tirtiray ka computer in hab fudud oo ammaan ah. Waxa kaliya ma ahan retrieves sawirada tirtiray ka your computer, laakiin sidoo kale sawiro yahay kuwa lumaya, formatted, iyo xataa kharribeen. Waxaa hadda taageertaa qaabab sawir sida JPG, T PNG, BMP, GIF iyo in ka badan.
Waxaad kartaa hoos ku soo bixi version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah. Version Maxkamad ku yaboohaya fursad lagu soo baarista drive computer adag oo aad u hubiso in aad sawiro lumay la kama uusan soo kabsan karaan ama aad.
Ceshano tirtiray Pictures ka Computer in 3 Talaabooyinka
Halkan aynu isku dayi Windows version of Wondershare Data Recovery. Ka hor inta aanan bilaabin in aan dib u soo kabashada, fadlan ha soo dajiyo qalab ku gaari ku adag in ay sawiro aad ayaa tirtiray.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada sawir computer tirtiray
Ka dib markii socda Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad ka arki kartaa interface bilaabatay 3 hababka soo kabashada, sida sawirka hoose qaab.
Si aad u soo ceshano sawirada tirtiray kombiyuutar, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" hore.
Tallaabada 2 Scan drive adag ama folder si aad u baadhid sawirada tirtiray
Markaas barnaamijka tusi doono oo dhan drives adag on your computer. Oo waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan Risaalo ka midigta ama folder oo guji "Start" si ay u bilaabaan u baar.
Haddii sawiro aad ayaa formatted, waxaad dooran kartaa "Enable Deep Scan" doorasho si aad u hesho iskaanka qoto dheer.
Tallaabada 3 Ladnaansho sawirada tirtiray ka computer eegista
Scan ka dib, waxaad awoodi doontaa in ay ku eegaan ee photos helay si loo hubiyo in barnaamijkan runtii caawisaa. Ka dibna waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan sawiro aad rabto oo guji "Ladnaansho" in ay doortaan waddo on your computer si ay u sii.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado sawiro ka soo kabsaday la overwritten, waxa si weyn lagu talinayaa si loo badbaadiyo sawirrada si aad baabuur kale oo adag on your computer.
Top Tababaraha 10 xijaab - software xijaab drive adag ugu wanaagsan